MAXBOOK-2 DOOR HEIGHT,5SHELVES-GLASS
> Household wear>MAXBOOK-2 DOOR HEIGHT,5SHELVES-GLASS
Height open glass door cupboard with5adjustable shelves. နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါးနှင့် ဗီရိုဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော စင်(၅)စင်ပါဝင်ပြီး၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနှင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
Size: W88*D30*H200 cm အတိုင်းအတာ – အလျား ၈၈၊ အနံ ၃၀၊ အမြင့် ၂၀၀ စင်တီမီတာ loading capability up to 50 kgs. per each shelf စင်တစ်စင်လျှင် ၅၀ ကီလိုထက်မနည်းတင်၍ အသုံးပြုနိုင်သည်။
MAX book collection is special designed for heavy load in all kind of books; Text book , Magazine etc MAX book ပရိဘောဂများသည် လေးလံသောစာအုပ်များ၊ မှတ်စုများ၊ မဂ္ဂဇင်းများအတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Dimensions : 880 x 300 x 2000 cm